Muqdisho: Qaraxii labaad oo geystay Khasaaro iyo faahfaahin ku saabsan - Caasimada Online
Home Warar Muqdisho: Qaraxii labaad oo geystay Khasaaro iyo faahfaahin ku saabsan
Muqdisho: Qaraxii labaad oo geystay Khasaaro iyo faahfaahin ku saabsan
Muqdisho (Caasimadda Online) – Magaalada Muqdisho ayaa daqiiqado ka hor marti gelisay qarax labaad oo xoggan oo lala eegtay Jagboonti ay ciidamada dowladda ku baaraan Gawaarida.
Meesha la qarxiyey oo saldhig u ah ciidamada Xasilinta Muqdisho ayaa ku taal meel aan sidaas uga fogeyn Sarta Seebiyaano.
Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaa uu ahaa mid gaari loo adeegsaday,isla markaana xili ay ciidamada baaritaano ka wadeen Koontoroolkaas uu qarxay.
Warar kale oo aan la hubin ayaa sheegayo inay is rasaaseyn dhex martay ciidamad dowladda iyo koox la sheegay inay gaariga saarneyn inkastoo aan warkaas la xaqiijin karin.
Waxaa jiro Khasaaro soo gaaray ciidamadii halkaas ku sugnaa iyo dad shacab ah oo saarnaa Baabuur iyo bajaajyo ku jiray feelka baaritaanka.
Ilaa hadda si rasmi ah looma ogaan khasaaraha ka dhashay qaraxaan, waxaana meesha ay wax ka dhaceyn isku gadaamay ciidamo boolis ah oo ka tirsan dowladda, sidoo kalana waxaa meesha gaaray gawaarida gargaarka deg deg ah.
Waa qaraxii labaad oo Muqdisho ka dhacay Maanta, waxayna labadaba ka siman yihiin in lala beegsaday saldhigyada ay ciidamada dowladda ku baaraan baabuurta, iyadoo arrintaan ay noqoneyso cabsi cusub oo usoo hoyatay dadweynaha Muqdisho.